NATO: Halgan Adag Ayaan La Geli Doonaa Burcadbadeedda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
NATO: Halgan Adag Ayaan La Geli Doonaa Burcadbadeedda
Uppdaterat onsdag 20 april 2011 kl 15.07
Publicerat onsdag 20 april 2011 kl 10.48
Dawladda oo guddi u saartay sidii burcadda looga hortegi lahaa
Burcad-badeed ka urgaarsaneysa bad-weynta Hindiya. Sawirle: Mats Nyström
Saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey oo dagaal lagula jiray burcad-badeedda ka qowleeysata xeebaha gacanka cadmeed iyo bad-weynta Hindiya ayaan illaa hadda aan laga gaarin natiijo wax ku ool ah.
Ciidammada badda ee Nato kana howl-gala carrigaa ayaa ku talo jira sidii ey is-bedel ugu sameeyn lahaayeen xeeshii ey ku howl-galayeen maadaama ey aad kor ugu sii kaceen tirada burcad-badeedda carrigaa maraakiibta ka ugaarsata.
- Caqabadaha ey burcad-badeeddu ku hayaan carrigaa, nawaaxiga ey ka ugaarsadaan oo maalinba maalinta ka dambeeysa sii dheeraanaya iyo dhibaatooyinka soo gaara la heeysetaasha oo sii kordhaya, sida uu sheegay Tryggve Ahlman, ahna madaxa waaxda ammaanka iyo teknikada ee ururka shirkadleeyda maraakiibta baayacmushtarka ee dalka Iswiidhen, sida ku cad war aannu ka soo xiganay hayadda wararka ee TT.
Tryggve Ahlman oo aanu haddaba khad aan wanaagsaneeyn ee telefoonka gacanta lagu qaato kula xiriirnay ayaa noo sheegay in dhibaatooyinka iminka taagan ee fiirada gaarka loo yeeshay yihiin iyada oo uu aad u sii ballaartay nawaaxiga ey ka hoowl-galaan burcad-badeeddu, middaasina oo aan u saamaxeeyn in ciidammada mariineeska ee carrigaa ku sugan ey taageero u fidiyaan maraakiibta, sida uu sheegay Tryggve Ahlman.
Tirakoobka xaqiiqda la hayo waxaa burcad-badeedda gacanta ugu jiray 29 maraakiib xamuul, batrool, kuwa kaluumeeysiga iyo doonyaha lagu mushaaxo, eyna ka soo qafaasheen badaha ku xeeran Soomaaliya ee gacanka cadmeedka badda cas iyo bad-weynta Hindiya, iyagoona ey dalbanayaan dhaqaale malaayiin gaarsiisan ee madax-furasho.
Shirkado badan ee maraakiibta isagana goosha badaha ayaa qeeylo dhaan ka dirsaday sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ey burcad-badeeddu ku hayaan gacanka cadmeed iyo bad-weynta hindiya, iyadoona qaar badan ee maraakiibtaa ka mid ahi hubeeyeen shaqaalahadooda, halka maraakiibta xamuulka ee dalkan Iswiidhen aaney falkaa weli ku dhaqaaqin kana codsadeen dawladdu iney middaa dhaba-tus u sameeyso. Iyadoona dawladdu baaritaan middaa ku waddo, lana filayo in jawaab ay middaa ka bixiso 30-ka bisha juun ee sannadkan, sida uu sheegay Tynggve Ahlman.
- Qeeylo dhaantan waxaan soo ban-dhignay bishii janaayo ee sannadkan, iyadoona ay dawladdu u saartay guddi baaritaan hoowlahan ku soo sameeya. Waa xaalad deg-deg lagu dhameeynayo iyadoona jawaabta la filayo 30-ka bisha juun ee sannadka.